SSAW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက် - တရုတ်ထ (Tianjin) သံမဏိအရောင်း
ချောမွေ့စွာ structures များ Tube
ချောမွေ့စွာ Coating ပိုက်
Lsaw Coating ပိုက်
SSAW Coating ပိုက်
1. အခြေခံပညာထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: SSAW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက် 2, ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် attribute: ထလော့-သံမဏိမော်ဒယ်: Q235A, Q235B, Q345, L245 (ခ), L290 (X42), L320 (X46), L360 (X52), L390 ။ လက်မှတ်: API ကို TSG ISO9001 ISO14001 CCEC မူလအစ: Hebei, တရုတ် 3. စိတ်တိုင်းကျ attribute: နျ Standard: API5L, ASTM A252, ASTM A53, GB ကို / T က 8, API ကို 5CT, ASTM A53, ASTM A500 ကို။ grade: X42-100 API ကို 5L: ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းတစ်ဦးက, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း B, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းက C မာခ် S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB ကို: Q195, Q215, Q235, Q345, L175 ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: SSAW ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်
2, ထုတ်ကုန် attribute တွေ
မော်ဒယ်: Q235A, Q235B, Q345, L245 (ခ), L290 (X42), L320 (X46), L360 (X52), L390 ။
လက်မှတ်: API ကို TSG ISO9001 ISO14001 CCEC
မူလအစ: Hebei, တရုတ်
3. စိတ်တိုင်းကျ attribute:
API5L, ASTM A252, ASTM A53, GB ကို / T က 8, API ကို 5CT, ASTM A53, ASTM A500 ကို။
X42-100 API ကို 5L: ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း B, X42, X46, X56, X60, X65, X70
ASTM A53: ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းတစ်ဦးက, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း B, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းက C
မာခ် S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
GB ကို: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555
ပြင်အချင်း: 406mm-1626mm (16 "-64")
မြို့ရိုးကိုအထူ: 6.4mm-54mm (1/4 "-21/8")
အဆုံး: က Round ကြီးစွန်းတိုင်အောင် (ဖြောင့်ဖြတ်ဖြတ်နှင့်မီးရှူးတိုင်ကို cut ကိုမြင်လျှင်) ။ သို့မဟုတ်အဘို့အ beveled ။
မျက်နှာပြင်: အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပေါ့ပေါ့တော၌ထားသော, Hot သို့ကျဆင်းလာ, Electro, အနက်ရောင်, ရှင်းလင်းသော, အရောင်တင်ဆီအပေါ်ယံပိုင်း / ဆန့်ကျင်ရေနံအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး။
လိုင်းပိုက်ဂီယာများအတွက် High-ဖိအားဂီယာပိုက်လိုင်းအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်, ဒါကြောင့်လည်းအောက်ပါသုံးခုရှုထောင့်အဖြစ်လူသိများသည်: အသုံးပြုသည်။
ထုပ်ပိုး: ပလတ်စတစ်, နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမှာရှိတဲ့ max ကို၏ဆဋ္ဌဂံအထုပ်ပလပ်ထိုးပေးရ။ 2000kg အတူ 2000kg, မြေ၏အဓိကကိုယ်ထည်ကိုအောက်ပါနှစ်ခုရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်း: 400 အမေရိကန်ဒေါ်လာ / Ton ~ 600USD / Ton
ငွေပေးချေမှုရမည့်: (ကြိုတင်မဲ 30deposit ထဲမှာ, မိတ္တူ B / L ဆန့်ကျင် 70balance) T / T
သို့မဟုတ်မျက်မှောက်မှာ, L / C ကို။ 100irrevocable
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: တစ်လလျှင် 10000 တန်
Delivery အချိန်: 15-30 ရက်အတွင်းတင်ပို့နိုင်ပါတယ်
အဆိုပါ customers'requirements သည်နှင့်အညီအစုအဝေးကို, PVC အင်္ကျီ: သမားရိုးကျထုပ်ပိုး
SSAW ဂီယာပိုက်စံ: API ကို 5L, ASTM A252, ISO3185, EN10208 ။ grade: Q235A, Q235B, Q345, l245 (ခ), L290 (X42), L320 (X45), L360 (X52), L390 (X56), L415 (X60) ။
Size: SSAW OD: 219.1mm-4064mm (8 '' '- 160' '') WT: 3.2mm-40 မီလီမီတာအရှည်: အရည် deliveryand ဓာတ်ငွေ့ပေးပို့အတှကျအသုံးပွု 6mtr-18mtr, ထိုကဲ့သို့သောအရည်ကိုရေပေးဝေရေး, ရေနုတ်မြောင်းနှင့်ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, အခိုးအငွေ့အဖြစ် ရေနံဓါတ်ငွေ့နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့။
လိမ်သံမဏိပိုက် extrusion ပုံမှန်အပူချိန်အောက်မှာဖွဲ့စည်း, သံမဏိ ciol အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်နှစ်ချက်ဝါယာကြိုးများနှင့်ကို double-မျက်နှာနစ်မြုပ်-ကို arc welded ၏နည်းပညာကိုယူပါ။
လိမ်သံမဏိပိုက်အဓိကအားဖြင့်တရုတ်, နှစ်ဆယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဓိကထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးစသည်တို့ကို, ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, အများပြည်သူ waterworks အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်: ရေပေးဝေရေး, ရေ, ရေနံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည်တို့ကိုပယ်စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်
ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်: ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့, ရေငွေ့, အရည်ရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဓာတ်ငွေ့စသည်တို့ကို
ဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက်: လိပ်ခေါင်း, တံတား, ဆိပ်ခံတံတား, လမ်း, ဗိသုကာဖွဲ့စည်းပုံစသည်တို့ကို
အချင်းအပြင်ဘက်တွင် 219.1mm-4064mm (8 '' '- 160' '')
နံရံအထူ 3.2mm-40 မီလီမီတာ
စံ API ကို 5L, ASTM A252, ISO3185, EN10208 ။
grade Q235A, Q235B, Q345, l245 (ခ), L290 (X42), L320 (X45), L360 (X52), L390 (X56), L415 (X60) ။
မျက်နှာပြင် အနက်ရောင်, ခြယ်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, အရောင်တင်ဆီ, Anti-သံချေးတော၌ထားသောစသည်တို့ကို
စျေး Term EX-အလုပ်မှာ, FOB, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး, CFR အ, CIF
ငွေပေးချေမှုရမည့် Term T / T မျက်မှောက်မှာ (ကြိုတင်မဲအတွက် 30% သိုက်, မိတ္တူ B / L ဆန့်ကျင် 70% ချိန်ခွင်လျှာ) သို့မဟုတ် 100% ဘယ်သို့ L / C ကို။
အထုပ် ဖောက်သည်များ '' လိုအပ်ချက်အရသိရသည်အမြောက်အများအတွက် bundle
လြှောကျလှာ အများပြည်သူ waterworks, ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းနှင့်မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးစသည်တို့ကို
Market က အာရှ, အလယျပိုငျးအရှေ့, အမေရိက, ဥရောပ, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, တောင်အမေရိက, etc
ယခင်: SSAW Coating ပိုက်
နောက်တစ်ခု: SSAW ဂီယာပိုက်
228mm Ssaw သံမဏိပိုက်
Anti-ချေး Ssaw သံမဏိပိုက်
Black က Ssaw သံမဏိပိုက်
ကာဗွန်သံမဏိ Ssaw ပိုက်
ဓါတုဗေဒ Prestressed Ssaw မိလ္လာပိုက်
အေးဆွဲ Ssaw ခရုသံမဏိပိုက်
ဒင် 2440 Ssaw သံမဏိပိုက်
သွပ်ရည်စိမ် Ssaw သံမဏိပိုက်
High Quality Ssaw သံမဏိပိုက်
High Quality Ssaw ဂဟေဆော်ခြင်းသံမဏိပိုက်
hot ရောင်းအား Ssaw ခရုသံမဏိပိုက်
Sawl Ssaw သံမဏိလိုင်းသွယ်တန်းထားသောပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
ခရုဂဟေ Ssaw ပိုက်
ခရုဂဟေ Ssaw သံမဏိပိုက်
Ssaw Sprial ဂဟေသံမဏိပိုက်
ဆောက်လုပ်ရေးသည် Ssaw သံမဏိပိုက်
ဓါတ်ငွေ့ Delivery သည် Ssaw သံမဏိပိုက်
Ssaw သံမဏိ Tube
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ Ssaw သံမဏိပိုက်
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Ssaw သံမဏိပိုက်
X80 ကာဗွန် Ssaw သံမဏိပိုက်
ERW Coating ပိုက်
OCTG Coating ပိုက်
ထကွ (Tianjin) Steel Sales CO ။ , LTD မှ
ဖုန်းနံပါတ်: +86 03175501600
E-mail ကို: sales9@rise-steel.com